esteem-search-the-best-app-to-dig-out-steem-content — Steemit
mmunited (60) in esteem •3months ago
ကျွန်တော်တို့သည် နည်းပညာ ဘီလူးကြီးတွေ က ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ search engines တွေဖြစ်တဲ့ Google, Bing, Yahoo စတာတွေကို ကို အသုံးပြုနေကြပါတယ်။ အခုအဲ့ဒိလိုမဟုတ်ပဲနဲ့ Steem blockchain အတွက်ရှာဖွေရေး search engine တစ်ခုကို esteem က ထုတ်လုပ်လိုက်ပါပြီ။
eSteem Search ဆိုတာကတော့ Steem blockchain ပေါ်မှာ တည်ဆောက်ထားတဲ့ search engine application တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Steem contest ရှာဖွေရေးမှာ ပိုပြီး အဓိကထားပြုထားတယ်။ eSteem Search ကို eSteem အဖွဲ့ကနေပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ကလင့်ခ်ကို နှိပ်ပြီး ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
Steem blockchain ပေါ်မှာ အချက်အလက်တွေကို ရှာမယ်ဆိုရင် eSteem search က ဘာလို့ အခြား search engine တွေထက်ပိုကောင်းတာလဲ။
Steem ပေါ်မှာရေးထားတဲ့ အရာ အားလုံးနီးပါး comments တွေအပါအဝင်ကို အစဉ်လိုက်စီထားပါတယ်။ အသစ်ထွက်သမျှတွေအကုန်လုံးကိုလဲ update လုပ်ပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
၄.Decentralized ဖြစ်တဲ့အတွက် ဆင်ဆာဖြတ်မထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုရရှနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၅.အသုံးပြုသူတွေရဲ့ log တွေအဖြစ်သိမ်းဆည်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၆.Steem မှာရှိနေတဲ့ အချက်အလက်တွေအကုန်လုံးကို ရှာလို့ရပါတယ်။
လူအများစုက plagiarism တွေ copy/.paste စတာတကို ရှာနိုင်ဖို့အတွက် google စတဲ့ search engine တွေကို သုံးကြပါတယ်။ ဒီ search engine တွေက မူရင်း လင့်ခ်တွေကိုရှာပေးတဲနေရာမှာ ကောင်းမွန်လှပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သင်ဟာ မိမိပိုစ့်ထဲမှာ ပါတဲ့ content ကို google မှာ ရှာမယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ ရှာလို့တွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ google က steemit ကို low index ကို ထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ eSteem search ကနေ အဲ့ဒိအခက်အခဲကို ဖြေရှင်းပေးလိုက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
eSteem search ကို သုံးခြင်းအားဖြင့်
သင် search bar ထဲမှာ ရိုက်ရှာလိုက်တဲ့ keyword နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ရလာဒ်တွေကို အလွယ်တကူရှာဖွေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကလဲ steem ပေါ်ကအချက်အလက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်.
တစ်ကယ်လို့ ရေးထားတဲ့ အကြောင်းအရာ တူညီနေပါကလဲ အလွယ်တကူ ရှာတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အောက်ကပုံတွေမှာတော့ google မှာရှာတာနဲ့ eSteem မှာ ရှာတာကို နှိုင်းယှဉ်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ keyword အနေနဲ့ကတော့ horpey birthday on steem ကိုသုံးပြီးရှာထားတာဖြစ်ပါတယ်။
eSteem Search Result
နောက်တစ်ဆင့်မှာကတော့ ပိုစ့်ရဲ့ content တွေနဲ့ ရှာတာကိုပြထားပါတယ်။ keyword အနေနဲ့ကတော့
"Just right beneath the heart It'sathing that can never be specified However destination comes into it when you happen to be smart The development of your body, mind and spirit Depend on the solid training ground you create in it"
curator တွေအတွက် အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်။ အလွယ်တကူနဲ့ ခိုးချထားတဲ့ ပိုစ့်တွေကို ရှာနိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။
Reference Link: https://steemit.com/esteem/@esteemapp/esteem-search-the-best-app-to-dig-out-steem-content-f19a641976f06est
Disclaimer: All images are taken from reference post.
esteem good-karma translation myanmar esteem-university
3 months ago by mmunited (60)
nayhlaingsoe (50) ·3months ago